किन फरक फरक हुन्छन् नयाँ वर्ष ? | किन फरक फरक हुन्छन् नयाँ वर्ष ? – हिपमत
आफ्नो जन्मदिन बारे त पक्कै याद हुनु पर्छ। ल भन त आज क – कस्को जन्म दिन हो ?
कुरा वर्षको आयो, ल क – कसलाई थाहा छ एक वर्ष भनेको के हो ?
‘गुड’, तिम्रो जवाफ एकदम ठीक छ तर मलाई एउटा अर्को कुरा पनि जान्न मन लाग्यो, हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ पृथ्वीले कुन दिन एक परिक्रमा पूरा गरी नयाँ परिक्रमा थालेको हुन्छ र एक वर्ष पूरा भएर अर्को वर्ष,नयाँ वर्ष शुरू भएको हुन्छ ?
अब पृथ्वी त बनेदेखि सूर्यको परिक्रमा गरिरहेको छ। यसले कुन बिन्दुबाट सूर्यरूपी मेचको परिक्रमा गर्न शुरू गरेको थियो त्यो जान्ने उपाय छैन। विश्वका सबै समुदाय – संस्कृतिले आफ्नो आफ्नो विचार अनुसार एउटा बिन्दुबाट परिक्रमा शुरू भएको ठानी त्यस दिन नयाँ वर्ष मनाउँछन्। अब तिमी भन्न सक्छौ प्रत्येक दिन नयाँ दिन भए जस्तै प्रत्येक दिन नयाँ वर्ष हो।
यो पनि सोच है, तिमीहरु प्लूटो नामक वामन ग्रहमा भएको भए तिमीले ‘बर्थडे केक’ खान कति दिन कुर्नु पर्ने हुन्थ्यो ?पृथ्वीमा त तिमीले केक काट्न ३६५ दिन कुर्नु पर्छ, होइन !
अर्को एउटा कुरा पनि सुन, प्लूटो नामक वामन ग्रहको खोज भए देखि अहिलेसम्म यसले सूर्यको एउटा पनि परिक्रमा पूरा गरेको छैन। अब भन त यो सानो प्रसंग पढेर तिमीहरु लाई अरु के के जान्न मन लाग्यो ?